Alahady tsotra faha-27 Mandavan-taona B | FKMP
Alahady tsotra faha-27 Mandavan-taona B
Mk. 10, 2-16
Aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona.
Tamin’izany andro izany, nanatona an’i Jesoa ny Farisianina mba haka fanahy Azy ka nanontany hoe: “Mahazo misao-bady va ny lehilahy?” Ary izao no navaliny azy ireo: “Ahoana no nandidian’i Môizy anareo?” Dia hoy izy: “Nomen’i Môizy alalana hanao taratasy fisaoram-bady sy hisao-bady ny lehilahy”. Fa hoy kosa i Jesoa: “Ny hamafin’ny fonareo no nanoratany izany didy izany ho anareo. Fa tamin’ny niandohan’izao tontolo izao, dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataon’Andriamanitra; noho izany dia handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy, ka hikambana amin’ny vadiny, ary ho nofo iray ihany izy roroa; koa tsy roa intsony izy, fa nofo iray ihany. Koa aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona”. Nony mby tao an-trano, dia nanontany ny amin’izany indray ny mpianany, ka hoy Izy taminy: “Na iza na iza misaotra ny vadiny ka mampakatra vehivavy hafa, dia mijangajanga mandika ny lalàm-panambadiana; ary raha ny vavy koa no misaotra ny lahy ka manambady hafa dia mijangajanga”. Ary nisy nitondra zazakely maromaro mba hametrahany tanana, nefa notenenin’ny mpianatra mafy ireo nitondra; ka tezitra i Jesoa nony nahita izany sady nanao taminy hoe: “Avelao hanatona Ahy ny zaza, fa aza raranareo, satria ny toa azy no hanana ny fanjakan’Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza tsy mandray ny fanjakan’ny lanitra tahaka ny zazakely dia tsy hiditra any”. Dia nofihininy izy ireo, sy nametrahany tanana, ary notsofiny rano.
Mazava ny fampianaran’i Jesoa momba ny fanambadiana; mampatsiahy ny naharian’Andriamanitra ny olombelona Izy. Noharian’Andriamanitra ho lahy sy vavy ny olombelona ary teo no niandohan’ny fanambadiana. Nohamafisin’i Jesoa Tompo ny fehim-pitiavana mampiray ny mpivady nakamban’Andriamanitra ho nofo iray tsy azo sarahan’olombelona. Ireo tenin’i Jesoa Tompo ireo dia nanandratra ny fanambadiana ho zary famantarana ny fitiavan’Andriamanitra mitoetra amin’ny fiainan’ny olombelona izany hoe famantarana hita maso ny fitiavan’Andriamanitra. Izany no maha-Sakramenta ny fanambadiana kristiana.
Ianareo rehetra nakamban’Andriamanitra ho nofo iray, miaina ny fehim-pitiavan’ny fanambadiana, Hiaina mandrakariva ny hasambaran’ny fitiavana anie ianareo ; handresy ireo sedra rehetra eo am-pamakivakiana ity fiainana an-tany ity ary hiara-handresy miaraka amin’i Kristy. Mijoroa hatrany ho famantaran’ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny fiainanareo satria ny fitiavan’Andriamanitra no mitoetra ao amponareo.
Previous Post: Asabotsy 26 B (Lk 10,17-24) 06/10/2018
Next Post: Alatsinainy 27B (Lc 10,25-37) 08/10/2018